शिक्षा Archives - Page6of 15 - Dna Nepal
एसईईको रिजल्ट कहिले आउँछ ? के हुँदैछ तयारी ? २८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०१:५९
काठमाण्डौं, चैत २८ । यो वर्षको एसईई परीक्षाको परीक्षाफल ढिलो हुने सम्भावना भएको छ । कर्मचारीको अभावामा परीक्षाफल प्रकाशित हुन ढिलो हुने भएको हो । २६ जिल्लाका शिक्षा समन्वय समिति प्रमुखको संघ र प्रदेशमा समायोजन भएकोले ती जिल्लामा कस्ले..
सामजिक विषयको प्रश्नपत्र पनि बाहिरियो १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०१:३१
काठमाण्डौं, चैत १५ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंका गरिएको छ । सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र सप्तरी र धनुषामा बाहिरिएको आशंका गरिएको हो । प्रश्नपत्र जनकपुरबाट बाहिरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । जनकपुरबाट..
विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही १४ चैत्र २०७५, बिहीबार ०१:११
काठमाण्डौं, चैत १४ । संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य..
एसईई परीक्षाको तयारी गर्दै गरेकी मनिषाले किन गरिन् आत्महत्या ? १२ चैत्र २०७५, मंगलवार ०१:२०
पाल्पा, चैत १२ । पाल्पामा आईतवार एसईई परीक्षा दिने एक किशोरीले आत्महत्या गरेकी छिन् । आइतबार पाल्पाको बग्नासकाली गाउँपालिका–६ की १६ वर्षीया मनिषा विकले पनि झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् । उनले त्यर्स गाउँको गुँगा माध्यामिक विद्यालयबाट एसईई..
१० वर्षमा ९ लाख विद्यार्थी गायव ! ३ चैत्र २०७५, आईतवार ०२:०७
काठमाण्डौं, चैत ३ । वितेको १० वर्षमा नौ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयबाट हराएका छन् । विसं २०६६ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई परीक्षा दिँदैछन् । २०६६ सालमा कक्षा १ मा १३ लाख ६२ हजार ९२० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । दश..
पोखरा महानगरमै खेताला शिक्षक ! ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १२:३०
प्रकाश ढकाल पोखरा, फागुन ३० । पोखरा महानगरभित्रैका विद्यालयमा खेताला शिक्षक राख्ने गरेको भेटिएको छ । सरकारले खेताला शिक्षक राख्न नपाउने निर्देशन गरेपनि महागरका केही विद्यालयहरुमा अझैपनि हट्न सकेको छैन । पोखरा १६ अर्मला स्थित शान्ती माविमा..
विप्लव माओवादीको बन्दले पोखरा महानगरमा ३० गते हुने ८ कक्षाको परीक्षा स्थगित २८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १५:०१
पोखरा, फागुन २८ । सोमबारबाट सुरु भएको पोखरा महानगर स्तरीय कक्षा ८ को पेशा व्यवसाय र प्रविधि विषयको परीक्षा स्थगित भएको छ । फागुन ३० गते निर्धा्रित सो विषयको परीक्षा चैत ७ गते बिहीबार बिहान १०ः३० सम्मका लागि सारिएको हो । महानगरस्तरीय परिक्षा..
घुस लिएर विद्यार्थी पास, शिक्षक अख्तियारको फन्दामा २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार ०१:४०
काठमाण्डौं, फागुन २७ । विद्यार्थीसँग घुस लिने भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्सका शिक्षक खेमराज शाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । उनले पास गराइदिने प्रलोभनमा प्रतिविद्यार्थी २५ हजार घुस लिने गरेको रहस्य खुलेपछि..
‘कलेजको लापरबाहीले विद्यार्थीको रहस्यमय मृत्यु’ २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०२:०७
काठमाण्डौं, फागुन २६ । सिरहा मिर्चैया नगरपालिका स्थायी घर भएका महेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो छोराको मृत्युको जिम्मेवारी काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेजले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले कलेजको लापरबाहीकै कारण छोराको निधन भएकाले..
शिक्षकले स्कुलमै खुकुरी देखाए, खोस्दा विद्यार्थीको हात काट्यो २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०२:५१
नवलपरासी, फागुन २३ । नवलपरासीको एउटा विद्यालयमा शिक्षक एवम् पूर्वप्रधानाध्यापक खुकुरी देखाउँदै विद्यालय पुगेपछि विद्यालयमा त्रास छाएको छ ।विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट राजिनामा दिन परेपछि आक्रोशमा आएका जितबहादुर चौधरीले बुधबार एक्कासी..